Raha efa manana ny iPad vaovao anao ianao dia ho hitanao fa tsy mora ny mahita sary kalitao misy valiny 2048 × 1536 teboka.
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia nanoro hevitra ny tranonkala izahay Interfacelift Ho anao izay mankafy ny sarin'ny endrika hipnotisika, na dia maniry lamba sy lamina aza ianao dia manome anao fonosana misy sary miisa 200. Averinay ihany fa sary miorina amin'ny firafitra sy lamina izy ireo.
Safidy iray hafa hahitana sary mitifitra miaraka amin'ny famahana ny Retina Display an'ny iPad vaovao dia ny mankany Google. Ao amin'ny fitadiavana sary dia miditra "wallpaper" isika (na ilay teny izay mahaliana anay) ary mifidy eo amin'ny tsanganana ankavia izay sary misy habe 2048 × 1536 teboka marina no aseho.
misintona: Wallpaper 200 | Loharano: Kolontsaina mac
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Wallpaper 200 ho an'ny Retina Display an'ny iPad vaovao
Aaaa dia hoy izy:
Tsy mandeha ny rohy! fiarahabana
Mamaly an'i Aaaa
Bump, ny fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Mpiaro ho an'ny efijery an'ny iPhone 4 na 4S anao